2 VaKorinde 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Tsamba Yechipiri kuvaKorinde 1:1-24
Kunyaradzwa naMwari mumatambudziko ese (3-11)
Kuchinja kwenzendo dzaPauro (12-24)
1 Pauro, muapostora waKristu Jesu maererano nekuda kwaMwari, naTimoti+ hama yedu, kuungano yaMwari iri muKorinde, kusanganisira vatsvene vese vari muAkaya yese:+ 2 Nyasha nerugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu, naShe Jesu Kristu ngazvive nemi. 3 Ngaarumbidzwe iye Mwari uye Baba vaShe wedu Jesu Kristu,+ Baba vengoni huru+ uye Mwari wekunyaradza kwese,+ 4 anotinyaradza* pamatambudziko edu ese,*+ kuti tikwanise kunyaradza vamwe+ pamatambudziko avo ese,* nekunyaradzwa kwatinoitwa naMwari.+ 5 Nekuti kutambura kwatinoita nekuda kwaKristu pakunowedzera,+ kunyaradzwa kwatinoitwa muna Kristu kunowedzerawo. 6 Kana tikasangana nematambudziko,* zvichaita kuti imi munyaradzwe uye muponeswe; uye kana tiri kunyaradzwa, zvichaita kuti imi munyaradzwe, zvokubatsirai kutsungirira matambudziko akafanana neatinosanganawo nawo. 7 Uye tariro yedu mamuri haizununguki, nekuti tinoziva kuti sezvo muri kutamburawo nesu, muchanyaradzwawo pamwe nesu.+ 8 Nekuti hama, tinoda kuti muzive nezvedambudziko ratakasangana naro munharaunda yeEzhiya.+ Zvinhu zvakanga zvakatiomera chaizvo, tisina chataigona kuita nesimba redu tega, zvekuti takanga tisina chokwadi kana taizopona.+ 9 Taitonzwa sekuti takanga tatongerwa rufu. Izvi zvakaitika kuti tivimbe naMwari+ anomutsa vakafa, kwete kuvimba nesimba redu. 10 Iye akatinunura panjodzi yakakura kudai yerufu uye achatinunurazve, uye tine tariro yekuti acharamba achitinunura.+ 11 Imiwo munogona kutibatsira nekutitetererera muminyengetero yenyu,+ kuti vakawanda vatinyengeterere vachitenda nekuda kwenyasha dzatinogamuchira panopindurwa minyengetero yevakawanda.+ 12 Nekuti chatinozvirumbidza nacho ndechekuti hana yedu inopupura kuti munyika takazvibata neutsvene uye nemwoyo wese kuna Mwari, uye izvi takanyanya kuzviita kwamuri, kwete neuchenjeri hwenyama,+ asi nenyasha dzaMwari. 13 Nekuti chokwadi tiri kungokunyorerai zvamunokwanisa kuverenga* muchinzwisisa, uye ndinovimba kuti mucharamba muchinyatsozvinzwisisa, 14 sekunzwisisawo kwamunoita kuti munofanira kuzvirumbidza pamusoro pedu, sekuzvirumbidzawo kwatichaita pamusoro penyu pazuva raShe wedu Jesu. 15 Saka nechivimbo ichi, ndaida kutanga ndauya kwamuri, kuti mufare zvakare kechipiri;* 16 nekuti ndaida kukushanyirai pandaienda kuMakedhoniya, ndozodzoka zvakare kwamuri ndava kubva kuMakedhoniya, imi mozoonekana neni ndichienda kuJudhiya.+ 17 Pandakaronga izvozvo, ndakazviona sezvinhu zvisina basa here? Kana kuti ndinoronga zvinhu maererano nenyama here, zvekuti ndinenge ndichiti “Hongu, hongu,” ndozoti “Aiwa, aiwa”? 18 Asi munogona kuvimba naMwari kuti hatikuudzei kuti “hongu” asi panguva imwe chete tichiti “aiwa.” 19 Nekuti Mwanakomana waMwari, Jesu Kristu, uyo akaparidzwa pakati penyu kuburikidza nesu, kureva ini naSirivhano* naTimoti,+ haana kuva “hongu” asi panguva imwe chete ari “aiwa,” asi kwaari “hongu” akava “hongu.” 20 Nekuti pasinei nekuti vimbiso dzaMwari dzakawanda sei, idzo dzakava “hongu” pachishandiswa iye.+ Saka nekwaari tinoti “Ameni” kuna Mwari+ kuti timukudze. 21 Asi Mwari, uyo akatizodza, ndiye anoita kuti imi nesu tive nechokwadi kuti tiri vaKristu.+ 22 Akaisawo chisimbiso* chake patiri+ uye akatipa mweya+ uri mumwoyo medu sechekufanobata chezvichauya.* 23 Iye zvino ndinodana kuna Mwari kuti andipupurire* kuti chandiri kuregerera kuuya kuKorinde ndechekuti ndisaramba ndichikurwadzisai. 24 Kwete kuti tiri vanatenzi vekutenda kwenyu,+ asi tinoshanda pamwe chete nemi kuti mufare, nekuti makamira nekutenda kwenyu.
^ Kana kuti “anotikurudzira.”
^ Kana kuti “pamiedzo yedu yese.”
^ Kana kuti “pamiedzo yavo yese.”
^ Kana kuti “nemiedzo.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “zvamagara muchiziva.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kuti mubatsirwe kaviri.”
^ Anonziwo Sirasi.
^ Kana kuti “chidhindo.”
^ Kana kuti “semari yekufanobatira chinhu; sechitsidzo chezvichauya; sevimbiso yezvichauya.”
^ Kana kuti “apupurire mweya wangu.”
2 VaKorinde 1